Windows 8 Consumer Preview ကို Virtual Box ထဲမှာ စမ်းပြီး သုံးကြည့်ရအောင် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » » Windows 8 Consumer Preview ကို Virtual Box ထဲမှာ စမ်းပြီး သုံးကြည့်ရအောင်
Windows 8 Consumer Preview ကို Virtual Box ထဲမှာ စမ်းပြီး သုံးကြည့်ရအောင်
By နေမင်းမောင်3:28 AM16 comments
ကျွန်တော် အခု Windows 8 Consumer Preview ကိုစမ်းပြီး အသုံးပြုချင်သူများ အတွက် Virtual Box ပေါ်မှာ တင်ပြီးတော့ စမ်းသပ် အသုံးပြုလို့ ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ရေးပေးသွားပါမယ် .. ကျွန်တော် အရင်က လည်း မြန်မာ ၀င်းဒိုးကို Virtual Box ပေါ်မှာ တင်ပြီး အသုံးပြုနည်း ဆိုပြီး ရေးပေးခဲ့ဖူးပါတယ် .. အခု ကျွန်တော် Virtual Box Install လုပ်ပုံကအစ တစ်ဆင့်ချင်း ရေးပေးသွားပါမယ် .. မသိသေးတဲ့ သူများပါ စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင် အဆင်ပြေပြေ လုပ်တက်သွား စေချင်လို့ပါ ..
အရင်ဆုံး Virtual Box ကိုတော့ သူရဲ့ မူရင်း ဆိုဒ်မှာ သွားပြီး ဒေါင်းလော့ ချရင်လည်း ရပါတယ် .. ကျွန်တော် အဆင်ပြေအောင် အောက်မှာလည်း တင်ပေးထားပါတယ် ..
Download Ifile.it ၊ Download Mediafire ၊ Download Sharebeast
အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်တွေကနေ Virtual Box ကို ဒေါင်းလော့ ချပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိတို့စက်မှာ Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ .. ကျွန်တော် အောက်မှာ Virtual Box Install လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ပုံးလေးနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
အပေါ်က အဆင့်တွေ အတိုင်း Virtual Box ကို မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်ပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Windows 8 Consumer Preview ကို အောက်က လင့်မှာ တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ် သွားပြီးတော့ ဒေါင်းလော့ ချလိုက်ပါ ..
Windows 8 Consumer Perview ကို ဒေါင်းလော့ ချပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Virtual Box မှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် စပြီး ပြင်ဆင်ပါမယ် ..
အရင်ဆုံး မိမိတို့ စက်မှာ Virtual Box ကို ဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း New ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
အပေါ်က ပုံအတိုင်း New ကိုနှိပ်ပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ အတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ ..
အောက် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အဆင့်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Virtual Box မှာ တင်ပြီး အသုံးပြုချင်တဲ့ OS အမျိုး အစားကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ ..
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ Name မှာ မိမိတို့ ပေးချင်တဲ့ အမည် တစ်ခု ပေးလိုက်ပါ .. ကျွန်တော်က Windows 8 လို့ ပေးလိုက်ပါတယ် .. ပြီးရင်တော့ Next ကိုပေးလိုက်ပါ ...
အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အဆင့်မှာတော့ မိမိတို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ Memory ပမာဏကို သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ မူရင်း အတိုင်းပဲ Next ပေးလိုက်ပါတယ် ..
အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Windows 8 Consumer Preview ကို တင်ပြီး အသုံးပြုချင်တဲ့ Partation ကိုရွေးပေး ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်ကတော့ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း လွတ်နေတဲ့ Partation အလွတ်ကို ရွေးလိုက်ပါတယ် ..
ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Save ပေးလိုက်ပါ ..
Save ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်း ပေးလာ ပါလိမ့်မယ် .. Next ဆက်ပေးလိုက်ပါ .. ကျွန်တော် တို့ တင်လိုက်တဲ့ Windows 8 Consumer နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ဖိုင်တွေက အဲ့ဒီ Partation ထဲမှာ ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ Create ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် Windows 8 Consumer Preview ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် Box တစ်ခု ဖန်တီး ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ် ..
အောက်က ပုံအတိုင်း Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ အခု Virtual Box မှာ တင်ပြီး အသုံးပြုမဲ့ Windows Consumer ISO File ကို ရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း သွားလိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံအတိုင်း မိမိတို့ တင်မဲ့ Windows 8 Consumer ISO လေးကို ရွေးလိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင် Next ကို ဆက်သွားလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင်တော့ Windows 8 Consumer Preview ကို စပြီး Install လုပ်လို့ ရသွားပါပြီ ..
အောက်က ပုံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ Language ရွေးပေးပြီး Next ကို ပေးလိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံအတိုင်း စပြီးတော့ Install လုပ်ပေးလိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံမှာတော့ ကျွန်တော် Windows Consumer Preview ISO မှာ တင်ပေးတုန်းက ပေးထားတဲ့ Key လေးကို ထည့်ပေးပါ .. ပြီးရင် Next ကိုပေးလိုက်ပါ ..
အောက်က အဆင့်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ Windows7တင်တဲ့ ပုံစံ အတိုင်းပါပဲ .. ကျွန်တော် ပုံလေးတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် ပြပေးထားပါတယ် ..
ဒီအဆင့်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က Use Express Setting နဲ့ Customize ဆိုပြီး ရွေးချယ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်ကတော့ Setting တွေ မပြင်ချင်တော့လိုက Use Express Setting ကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ..
အောက်က အဆင့်မှာ မိမိတို့ လိပ်စာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ ..
ဒီအဆင့်မှာ တစ်ခု သတိထားရမှာက Microsoft ကနေ သူတို့ ရဲ့ Windows Version ကို Security ပိုင်း ပိုပြီးတော့ တိုးမြှင့်ပြီး ဆောင်ရွက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ် .. ။ ဒီမှာ ပေးခဲ့တဲ့ အီးမေးလ်နဲ့ ပါတ်ဝက်စ် ကိုသေချာ မှတ်ထားပေးပါ .. ဒါမှသာ နောက်ပိုင်း Windows ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးချင်တယ် ဆိုရင် ဒီပါတ်ဝက်စ် ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ၀င်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အပေါ်က ပုံနှင့် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အချက် အလက်လေး တွေကို ဖြည့်ပေးပါ .. ပြီးရင် Next ပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင် Welocome Screen ကို စပြီး မြင်တွေ့ရပါပြီ ..
ဒါကတော့ Windows 8 Consumer Preview ရဲ့ Start Screen မြင်ကွင်းပါ .. အောက်မှာ ကျွန်တော် သူရဲ့ ပုံစံလေးတွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
ဒီနေရာမှာ ဆက်ပြီး ကျွန်တော် ရေးပေးချင်တာလေးက ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အခုတင်ထားတဲ့ Windows 8 Consumer Preview လေးကို Virtual Box ထဲမှာ ထည့်ပြီး မသုံချင်တော့ဘူး ဆိုရင် အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Windows 8 ပေါ်မှာ Right Click ထောက်ပြီး Remove လုပ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ .. ဒါဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ..
ဒီပို့စ်လေးကို PDF ဖြင့် လိုချင်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
kyaw March 17, 2012 at 4:18 AM
kyaw March 17, 2012 at 4:19 AM
moe kyaw March 17, 2012 at 3:03 PM
အသိပညာ တခုထက်တိုးပေးတဲ့ အတွက် ကျေဇူးတင်ပါတယ်။
moe kyaw March 17, 2012 at 3:06 PM
thankalot.ko nay min maung
အကို နည်းနည်းလောက်မေးချင်လို့ ဒီ virtualbox ထဲမှာ mac windows ကိုရော run ပြီးသုံးလို့ရလားဟင် ကျွှန်တော်စက်ကတော့ pc ပါအကို သိတဲ့သူငယ်ချင်းများလဲဖြေပေးပါနော်
T N N March 17, 2012 at 6:58 PM
ကျေဇူးလည်းတင်တယ်….ဒီထက်မက ပိုပြီး အခုလိုမျိုး တန်ဖိုး ရှိလှတဲ့ ပိုစ့် များများတင်နိုင်ပါစေဗျာ.
Ko Arkar March 18, 2012 at 5:39 AM
လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ Windows 8 Consumer Preview winR ဖိုင်က ဖြေလိုက်တော့ iso ဖိုင်ထွက်မလာဘူး exe ပဲတွေ့တယ် အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်တော့လဲ box လေးတစ်ခုတက်လာပြီးတော့ Running ပဲလုပ်နေတယ် ဆက်ပြီးဘာမှပေါ်မလာတော့ဘူး အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြပေးပါခင်ဗျ
နေမင်းမောင် March 18, 2012 at 11:11 AM
ဟုတ်ကဲ့အကို ... ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ Windows Consumer Preview က Rar ဖြေစရာ မလိုပါဘူး .. အဲ့ဒါ ISO File ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အဲ့ဒီ ISO File ကို ရွေးပြီး အသုံးပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
Anonymous March 18, 2012 at 2:02 PM
ကိုနေမင်းမောင်..တင်တဲ့ အချိန်အထိ အားလုံ့းအဆင်ေူပပါတယ်။ SAVE လုပ်တဲ့အခါကျမှ လုပ်လို့မရတာပါ။စက်က Dell window7ပါ. ကျွန်တော့်စက်မှာ ( c ) တခုထဲရှိပါတယ်။ အခုမှ (d)ထပ်ခွဲလို့ ရပါသေးလား။ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရမလဲ။နည်းပညာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်..အေးနောင်
Sann March 18, 2012 at 9:57 PM
ညီလေးရေ..... အခုလို တင်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါကွာ... အကို သိချင်တာက အကိုက အခု VB ပေါ်မှာ Window XP တင်လိုက်ပါတယ် ညီလေးရေ.... အဲဒီ VB ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ၀င်းဒိုးပေါ်မှာ ဆော့ဝဲ Run ပြီး သုံးလို့ ရလား ညီလေး.... အကိုတော်တော် ဒုက္ခရောက်နေလို့ ပါ...... အကို့ စက်က Window7ဖြစ်နေတာ... ပြီးတော့စက်က DVD Rom က မကောင်းတော့ USB နဲ့XP တင်တာကလည်း အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ် ညီလေးရေ.... ကျောင်းက ဆော့ဝဲယား တစ်ခုက Vista အထိပဲ Support လုပ်တော့ တော်တော်လေး ပျားတုပ်နေပါတယ်...... အကို အခု VB ပေါ်မှာ ဆော့ဝဲ Run လို့ ရမရ သိချင်ပါတယ် ညီလေ.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
Sann March 18, 2012 at 10:06 PM
ဆော့ဝဲ Run လို့ ရသွားပြီ ညီလေးရေ...... ကျေးဇူး ညီလေးရေ....
VM ware မှာ windows8 တင်တာ key ကိုစပို့မလုပ်ဘူးဘဲ့ပြောနေတယ်.. vm ware မှာတင်လို ရမရသိချင်ပါတယ်...32bit ကီးနဲ့ 64bit ကီးကအတူတူဘဲ့လား.ဒေါင်းထားတာကတော့ iso ဖိုင်နဲ့ပါဘဲ့.
နေမင်းမောင် March 21, 2012 at 4:11 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို .. V-Mware တော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတက်ဘူးခင်ဗျာ ... ကျွန်တော် Virtual Box နဲ့ စမ်းတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်အကို .. ကီးက နှစ်ခုလုံးအတွက်ပါခင်ဗျာ ..
blackemo March 26, 2012 at 9:14 PM
အဲ့ တာ ရှာလို့ မရဘူး ကိုနေမင်းမောင်...Hard disk က အလွတ်မှရမှာလား။။။
manaing April 10, 2012 at 7:40 PM